Fisolokiana ho akaiky ny minisitra Hajo: sarona ilay « assistant parlementaire » nitaky volabe | NewsMada
Fisolokiana ho akaiky ny minisitra Hajo: sarona ilay « assistant parlementaire » nitaky volabe
Sendra ny nahay azy ilay “assistant parlementaire” ka sarona tamin’ny fisolokiana. Niakatra fitsarana, omaly, ary naiditra avy hatrany am-ponja izy io.
Nitonona ho mpiasan’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MaTP) ary nilaza ho akaiky ny ministra Andrianainarivelo Hajo ity olona ity. Nentiny nakana vola 10 tapitrisa Ar tamin’ny mpandraharaha iray hikarakarana ny ahazoana ny tsenambaro-panjakana izany. Nambarany fa fandrakofana vato ny lalana mirefy 8 km eny amin’ny kaominina Ambatofahavalo, Atsimondrano, ny asa hatao ka homena ny ministra io vola io. Mbola hafa kosa ny anjarany na ny « commission » ho azy.
Tsy nipetra-potsiny anefa ilay mpandraharaha ka nanamarina teny anivon’ny MaTP momba ilay tsenan’asa sy ity mitonona ho mpiasa sy akaiky ny minisitra ity. Tsy mitombina avokoa ireo rehetra ireo ka nametraka fitoriana ilay mpandraharaha. Nitory teny amin’ny sampandraharahan’ny fikarohana momba ny heloka bevava eny Fiadanana. Anton’izany ny fisolokiana andraikitra sy ny fakana tsy ara-dalàna vola nataon’io olona io. Nanao ny fanadihadiana, araka izany, ny zandary ary nanamarina teny anivon’ny MaTP sy nampahafantatra ny fisian’ny fitoriana nataon’ilay mpandraharaha momba ity fisolokiana ity.
Voasambotra tamin’ny vela-pandrika
Tsy niandry ela fa nanome toromarika ny tale misahana ny raharaha ara-pitsarana eo anivon’ny MaTP ny minisitra amin’ny hametrahana fitoriana ihany koa amin’ny anaran’ny tenany manokana, Andrianainarivelo Hajo, sy amin’ny anaran’ny minisitera. Samy voatonontonona ao anatin’ilay raharaha avokoa ireo. Voasambotra ny harivan’ny 1 avrily ity olona ity rehefa nametrahana vela-pandrika. Nampiakarina fampanoavana ny alarobia 7 avrily rehefa avy natao fanadihadiana teo anivon’ny zandary.
Niaiky ny tenany nanoloana ny mpitandro filaminana fa naka vola tamin’ilay mpandraharaha. Voamarina tamin’izany koa fa « assistant parlementaire” an’ny depioten’i Madagasikara voafidy tao Mananjary izy. Efa naveriny amin’ilay mpandraharaha, efa nisintona ny fitoriana, ilay vola nalainy. Na izany aza, tsy maintsy nampiakarina fitsarana ny raharaha satria mbola nipetraka ny fitoriana nataon’ny MaTP.